NGABA ISANITIZER YESANDLA IYAYIBULALA ICORONAVIRUS (COVID-19)? CHAZA OGQIRHA - I-COVID-19
Ngaba iSanitizer yesandla iyakukhusela ngokwenene kwiCoronavirus? Chaza oGqirha
UNodar ChernishevImifanekiso kaGetty
Njengoko inoveli ye-coronavirus (i-COVID-19) yoyika ikhula, isicoci sesandla siyaqhubeka nokuthengisa kwiivenkile zasekuhlaleni nakwi-intanethi.
Nangona kunjalo, uninzi lwabantu kwimidiya yoluntu lubanga ukuba isicoci sesandla asisebenzi ngokuchasene ne-COVID-19.
Oogqirha besifo esosulelayo bachaza ukuba isicoci sesandla singayibulala i-coronavirus kunye neyona ndlela yokuzikhusela kwisifo.
Ewe kwenzekile: Abantu bayazimela malunga nenoveli coronavirus. Akunakwenzeka ukuba ungene kwi-intanethi okanye kwiivenkile ngaphandle kokukhunjuzwa ngento yokuba i-COVID-19 iyasasazeka e-US Ngelishwa, kukho ulwazi oluninzi olungelulo kwi-intanethi. Kwimeko yenqaku: Zininzi iiTweets ezijikelezayo zokuba isicoci sandla asisebenzi ekubulaleni i-coronavirus. Umzekelo:
Njengoko amacala e-COVID-19 eqhubeka nokunyuka kwihlabathi liphela, kungokwemvelo ukuba nemibuzo malunga nendlela yokuzikhusela (ngakumbi kuba akunakwenzeka ukufumana izixhobo zokucoca izandla kwiishelufa ngoku). Ke, ngaba i-sanitizer yesandla iyayibulala nyani i-coronavirus? Sijonge kwiingcali zezifo ezosulelayo ukuze silungise izinto.
Ngaba isicoci sesandla sibulala i-coronavirus?
Ewe kwaye hayi. Isicoci sesandla sinokukunceda ukhuseleke kwi-coronavirus, kodwa yona akufuneki ukuba ithathelwe ingqalelo njengomgca wokuqala wokuzikhusela kwi-COVID-19 . Ukuhlamba izandla ngesepha namanzi kunye nokukhuhla ubuncinci imizuzwana engama-20 kuyacetyiswa, kodwa isicoci sanitizer esine-60% yotywala yeyona ndlela ilungileyo, utsho URichard Watkins, MD , ugqirha wezifo ezosulelayo kunye nonjingalwazi kwezamayeza kwiYunivesithi yoNyango yaseNyakatho-mpuma yeOhio.
I-Coronaviruses zineentsholongwane ezigutyungelweyo zichaza UDavid Cennimo, MD , unjingalwazi oncedisayo kunyango lwezifo ezosulelayo eRutgers New Jersey Medical School. Oku kuthetha ukuba bane-membrane yangaphandle okanye imvulophu, eyiyo eyaziwa ngokuba ibulawe okanye ingasebenzi ngabantu abacoca utywala ngesandla. Ke, i-COVID-19 kufuneka ibulawe nayo, yongeza.
Kodwa ukusebenzisa isicoci sesandla kuphela akusayi kukukhusela kwi-COVID-19 ukuba unxibelelana nayo.
ICoronavirus icingelwa ikakhulu isasazeke phakathi kwabantu abasondeleleneyo , okanye malunga neenyawo ezintandathu. Xa umntu owosulelekileyo ekhohlela okanye ethimla, avelisa amathontsi okuphefumla, anokuwela emilonyeni okanye empumlweni yabantu abakufutshane (okanye bangene ngaphakathi emiphungeni) kwaye ubosulele, ngokwe Amaziko oLawulo lweZifo noThintelo (I-CDC).
Oko kuthetha ukuba ungadibanisa izandla zakho nge-sanitizer yezandla yonke into oyifunayo, kodwa ukuba umntu one-coronavirus uyakhohlela okanye akathimle, loo sanitizer ayizukwenza nto. (Kuyafana nakwiimaski zobuso, ezingasebenziyo ukuba awuguli .)
I-CDC ikwatsho ukuba kunokwenzeka ukuba ikhontrakthi ye-coronavirus isuswe ukuchukumisa indawo engcolileyo kwaye uchukumise owakho umlomo, impumlo, okanye amehlo akho. Kodwa oku akucingelwa ukuba yeyona ndlela iphambili inwenwa ngayo intsholongwane. Ingahanjiswa ngaloo ndlela, kodwa kusenokwenzeka ukuba ibe kwindawo yesibini xa ithunyelwa ngokuthe ngqo, itsho njalo ingcali ngezifo ezosulelayo UAmesh A. Adalja, MD , umphengululi omkhulu kwiziko likaJohn Hopkins loKhuseleko lwezeMpilo.
Kuya kufuneka usebenzise isicoci sezandla ngokufanelekileyo ukuze sisebenze.
Uninzi lwabantu lubamba nje izandla zicocekile ezandleni, zihlikihle umzuzwana, kwaye uhambe malunga nosuku lwabo, kodwa ayisiyondlela echanekileyo yokuyisebenzisa. Endaweni yoko i-CDC icebisa ngokuthe ngqo ukubeka i-sanitizer ezandleni zakho, ukuyigubungela nge-sanitizer, kwaye uyihlikihle kunye de ibe yomile, enokuthi ithathe malunga nemizuzwana engama-20.
Uyakufuna kwakhona ukuqinisekisa ukuba usebenzisa i-sanitizer yesandla esekwe etywaleni ephakathi kwe-60 ukuya kwi-95% yotywala, utshilo uGqirha Cennimo. Ezi mveliso zihlala ziqukethe i-ethyl alcohol (i-ethanol) kunye ne-isopropyl alcohol.
Kukwakho nemibuzo malunga nokuba kufanele kusetyenziswe iimveliso ezinelebhile elwa neentsholongwane okanye ii-antimicrobial. Umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini ziindidi zeentsholongwane ezisebenza kuzo. Iimveliso ze-antibacterial zithintela ukukhula kweebhaktiriya, kodwa iiarhente zokuthintela ukosuleleka ezinje ngesiselo esinxilisayo esinqanda utyando lokusasazeka kwebhaktiriya, ukungunda kunye nezinye iintsholongwane. Ndingasebenzisa enye enelebheli yokubulala iintsholongwane, utshilo uGqirha Watkins.
Sisekuxinana kwe ingqele kunye nexesha lomkhuhlane , kwaye zininzi ezinye Iintsholongwane ezijikelezayo phaya phandle ofuna ukuyiphepha. Ngelixa i-sanitizer yesandla inokukunceda ukukhusela kwi-coronavirus ukuba kunokwenzeka uyifumane ezandleni zakho, isicoci sesandla asisebenzi ngokuchasene ne-norovirus, C. difficile, kunye nezinye iiparasites, utshilo uGqirha Watkins.
Nangona kunjalo, uyongeza, ukuhlamba ngesepha kunye namanzi kuya kunceda ukubulala i-coronavirus kwaye ezinye iintsholongwane. (Jonga oku kuhlaziya kwakhona kwifayile ye- eyona ndlela yokuhlamba izandla .)
Ewe kunjalo, akusoloko kunokwenzeka ukuba uqokelele xa ungaphandle kwaye, ngakumbi ukuba uthembele kwizithuthi zikawonkewonke. Kula maxesha, kulungile ukuba ufikelele kwisicoci sesandla de ube uyokufika esinkini-oko kukuthi, ukuba ungasifumana.
Ngezinye iindlela ezivunyiweyo zeengcali zokunciphisa umngcipheko wokugula, landela izicwangciso ezingezantsi:
Gwema ukuthinta amehlo akho, umlomo, okanye impumlo.
Kuphephe ukunxibelelana ngokusondeleyo naye nabani na obonakala egula.
Gubungela ukukhwehlela kwakho okanye uthimle ngethishu, emva koko ulahle intsholongwane kudoti.
Ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane kwizinto ezichukumisiweyo rhoqo kunye nomphezulu.
Thetha nogqirha wakho ukuba uvelisa iimpawu ngaphakathi kweentsuku ezili-14 ubuyile kwilizwe elinokuqhambuka kwe-COVID-19.
Hlala ekhaya ukuba uhlakulela iimpawu ezibandayo okanye ezinjengomkhuhlane.
Kulumkele ukuhamba okungabalulekanga kwiindawo ezinokuqhambuka kwe-COVID-19.
Ndwendwela iwebhusayithi yesebe lakho lezempilo ukuze uqiniseke ukuba ufumana uhlaziyo oluchanekileyo.
indlela yokuphelisa intloko ebuhlungu
zikhangeleka njani iincukuthu
eyona nto iphambili kwimveliso yamabala amabala
lithetha ukuthini inani u-666
ijusi yealoe vera ye-asidi ye-asidi
lifikile nini ixesha lokuqhawula umtshato